Daawo:- Xaqiiqooyin la yaab leh oo ku saabsan Xaaska D. Trump (Melenia) - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa soo baxaya su’aalo badan oo jawaabo loo la’yahay, kuwaasoo ku hareereesan xaaska ninka u tartamaya jagada madaxtinimada Mareeykanka Donald Trump, waxaa su’aal ka taagantahay sida ay ku noqotay Ameerikaan, ineey horay guur usoo martay iyo sida ay ku heshay Kaarka Cagaaran?.
Melenia Trump, waxaa la sheegay ineey ahayd gabar Model ah oo kasoo shaqeysay dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga.
Melenia Trump, waxeey asal ahaan kasoo jeedaa dalka Slovenia, waxeeyna muwaadin Ameerikaan ah noqotay sanadkii 2006, hal sano kadib markii ay guursatay ganacsadaha Donald Trump, guurkaasoo ka dhacay magaalada Florida.
Waxeey horay u sheegtay ineeysan waligeed soo guursan kahor Donald Trump, laakiin waxaa la xaqiijiyay ineey guur soo martay.
Melenia, waxeey sheegtay ineey Mareeykanka soo gashay sanadkii 1996, balse Bilooyin kadib ay dalkeeda Slovenia dib ugu laabatay si ay usoo cusbooneeysiisato VISAHA oo ka dhacay markaas.
Sawiradii qaawanaa ee ay jariirada The New York Post, dhawaan ka faafisay Melenia, ayaa la sheegay in laga qaaday xili ay ka shaqeyneysay Manhattan 1995.
Warbaahinta ka howlgasha gudaha Dalka Mareeykanka, ayaa maalmihii lasoo dhaafay si aad ah u tabinayay qaabkii ay Melenia kusoo gashay Mareeykanka iyo sidii ay ku noqotay muwaadinad Ameerikaan ah.